Suuq-geynta Jiilalka: Sida Jiil waliba ula Qabsaday ugana Faa'iidaystay Teknolojiyada | Martech Zone
Waa wax caadi ii ah aniga inaan taahayo markaan arko maqaal aan ku dhaleeceynayo Millennials ama aan sameynayo dhaliil kale oo xun oo dhaleeceyn ah. Si kastaba ha noqotee, shaki yar ayaa jira inaysan jirin dabeecad dabiici ah oo udhaxeysa jiilalka iyo xiriirka ay la leeyihiin tikniyoolajiyadda.
Waxaan u maleynayaa inay nabdoon tahay in la yiraahdo taas, celcelis ahaan, jiilasha waawayn ayaan ka waaban inaad taleefanka ka qabato oo aad qof wacdo, halka dadka da'da yar ay u boodi doonaan farriinta qoraalka. Xaqiiqdii, waxaan xitaa leenahay macmiil dhistay a fariin qoraal ah madal dadka wax qoraya ay kula xiriiraan musharixiinta times waqtiyada ayaa isbedelaya!
Jiil kasta wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah, mid ka mid ah waa sida ay u adeegsadaan tikniyoolajiyadda. Iyada oo tikniyoolajiyaddu si dhakhso leh ugusoo cusbooneysiinayso xawaare jaban, farqiga u dhexeeya jiil kasta ayaa sidoo kale saamayn ku leh habka koox da 'kasta u adeegsato aalado farsamo oo kala duwan si ay noloshooda ugu fududaato - nolosha iyo goobta shaqada labadaba.
Waa maxay Jiilka (Boomers, X, Y, and Z)?
BrainBoxol waxay soo saartay macluumaadkan, Evolution Tech-ka Iyo Sida Aan Dhamaanteen Ugu Jirno, Taasi waxay faahfaahin ka bixinaysaa jiilal kasta iyo qaar ka mid ah dabeecadaha ay wadaagaan ee la xiriira korsashada teknolojiyadda.
Dhallaanka carruurta (Wuxuu dhashay 1946 iyo 1964) - Carruurta soo baxda waxay ahaayeen kuwa hormoodka ka ah qaadashada kumbuyuutarrada guriga - laakiin xilligan noloshooda, xoogaa way ka sii badan yihiin diidmo ku saabsan korsashada teknoolojiyada cusub.
Generation X (Wuxuu dhashay 1965 ilaa 1976) - ugu horreyn adeegsiga emayl iyo taleefan si aad ula xiriirto. Gen Xers waa waqti badan ku qaadashada khadka tooska ah iyo adeegsiga taleefannadooda casriga ah si ay u helaan barnaamijyada, warbaahinta bulshada, iyo internetka.
Millennials ama Generation Y (Wuxuu dhashay 1977 ilaa 1996) - ugu horeyn waxaa laga isticmaalaa fariimaha qoraalka ah iyo baraha bulshada. Millennials waxay ahaayeen jiilkii ugu horreeyay ee ku barbaara warbaahinta bulshada iyo taleefannada casriga ah waxayna sii ahaadaan jiilkii ugu ballaarnaa ee adeegsiga tikniyoolajiyadda.
Jiilka Z, iGen, ama Centennials (Wuxuu dhashay 1996 iyo wixii ka dambeeyay) - ugu horreyn adeegso qalabka isgaarsiinta gacanta iyo agabyada si aad ula xiriirto. Xaqiiqdii, waxay ku jiraan barnaamijyada farriimaha 57% waqtiga ay isticmaalayaan taleefannadooda casriga ah.
Sababtoo ah kala duwanaanshahooda kala duwan, suuqleyda ayaa inta badan u adeegsada jiilasha si ay si fiican ugu bartaan warbaahinta iyo kanaalka maaddaama ay la hadlayaan qayb gaar ah.
Waa maxay Suuq-geynta Jiilka?
Suuqgeynta jiilka waa qaab suuq geyn ah oo adeegsaneysa kala qeybsanaan ku saleysan koox dad ah oo ku dhashay isla waqti isku mid ah oo wadaaga da 'isbarbardhig ah iyo marxalad nololeed oo ay qaabeeyeen waqti gaar ah (dhacdooyinka, isbeddellada, iyo horumarka).
Faahfaahinta buuxda waxay bixisaa dabeecado faahfaahsan, oo ay ku jiraan qaar runti dhib badan oo sababa isku dhac u dhexeeya kooxaha da'da. Fiiri…
Tags: ilmaha boomerBoomersboomersboqol sanoisku duubnigen yjiilkajiil xjiil ysuuqgeynta jiilkajiilgenxhiddo-wadahahaaqaybintaTechnologyadeegsiga tikniyoolajiyadda jiilkay
Feb 17, 2021 markay ahayd 10:25 PM
Waxay leedahay Gen Z "200% ayey u badan tahay inay ku hadlaan taleefanka gacanta inta lagu jiro wareysiga shaqada" - "200% sida ay u badan tahay" waxay u baahan tahay isbarbardhig, YAA ku hadlaya taleefanka gacanta inta lagu jiro wareysiga shaqada? oo kani ma warayste baa mise waa la wareystaha? Iyo sidee tan ugu habboon tahay iyadoo 200% kaliya la dareemayo inay caadi tahay la hadalka, qoraalka, ama dabaasha inta la shaqeynayo? Wareysiga shaqadu Wuu shaqeynayaa… .. haddii boqolkiiba 6% keliya ay dareemaan inay caadi tahay, sidee ayay laba jeer ugu dhow yihiin inay ku fiicnaadaan inay ku hadlaan taleefanka inta lagu jiro wareysiga shaqada? Tani macno malahan, xisaab ahaan uun !!! ?????
Feb 18, 2021 markay ahayd 5:48 PM
Taasi waa kormeer adag. Waxaan u maleynayaa inay ka badbaado fiicnaan lahaayeen iyagoo leh… “waxay u badan tahay”.